सम्पादकीय : लोडसेडिङलाई बिदाइ - Naya Patrika
सम्पादकीय : लोडसेडिङलाई बिदाइ
दुई वर्षपहिलेको नेपालको विद्युत् उत्पादन र वितरणको अवस्था सम्झँदा पनि कहाली लाग्छ । वर्षायाममा पनि आठ घन्टाको लोडसेडिङ ! सुक्खायाममा १८ देखि २० घन्टासम्मको अँध्यारो ! मानिसहरू सुत्दा बत्ती आएको हुँदैनथ्यो र उठ्दा गइसकेको हुन्थ्यो । जेनेरेटरको घ्यारघ्यार र डिजेलको गन्धले सडक, होटेल, कार्यालय, व्यवसाय जताततै दिक्क भइन्थ्यो । इन्भर्टर र ब्याट्रीको व्यापार औधि फस्टाएको थियो । मैनबत्तीदेखि टुकीसम्मको प्रयोगमा अत्यधिक वृद्धि भएको थियो । हरेक काममा उल्झन थियो । बत्ती छैन, बत्ती आएपछि गरौँला , तर कतिवेला आउँछ थाहा छैन । धेरैजसो उद्योगको उत्पादनमा ह्रास आएको थियो । हरेक व्यवसायको लागतमा अत्यधिक वृद्धि । एउटा निस्सासिँदो कालखण्डमा स्वाभाविक ठानेर सरकारलाई गाली गर्दै विद्युत् प्राधिकरणलाई अपराधीकरण भन्दै मानिसले दिन बिताइरहेका थिए । निराशा रममा थियो ।
तर अचानक जब ०७२ असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युुत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक बनाए अनि एक महिनापछि नै अवस्थामा अचम्मलाग्दो परिवर्तन आयो । पहिले त काठमाडाैँ उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरियो । मानिसले अचम्म माने । धेरैले बाहिर लोडसेडिङ गरेर काठमाडौंमा उज्यालो बाँडेको भन्दै गाली पनि गरे । तर, व्यवस्थापनमा परिवर्तन गर्दै जाँदा बिस्तारै मुख्य सहर र देशैभर घरेलु उपभोगमा विद्युत् कटौती हुन छाड्यो । अस्तिदेखि देशभर उद्योगमा समेत विद्युत् कटौती नहुने घोषणा गरिएको छ । प्रसारण लाइनलगायत कतिपय प्राविधिक पक्षको कमजोरीले कतैकतै विद्युत् नियमित रूपमा आपूर्ति हुन नसक्ने छिटफुट घटनाबाहेक अब कसैले पनि विद्युुत् कटौतीको मार खेप्नु नपर्ने भएको छ । यो नेपालका लागि केही वर्षपहिलेसम्म कल्पनै नगरिएको उपलब्धि हो । यसका लागि विद्युत् प्राधिकरण र खासगरी कुलमान घिसिङलाई जति धन्यवाद दिए पनि कम हुन्छ ।
नेपाल जलविद्युत् उत्पादनका लागि अपार सम्भावना भएको देश भएर पनि लामो समयसम्म नीतिगत समस्याका कारण उत्पादन बढाउन नसकेर पछि परेको थियो । यसै पनि उत्पादन थोरै थियो, अर्कातिर प्राधिकरणभित्र पल्केको कमिसनखोरको जालोले भएको विद्युत्समेत घुस खाएर सीमित उद्योगलाई मात्र दिने र आमजनतालाई अन्धकारमा राख्ने अपराध गरेका थिए । यसले देशलाई अर्बौं खर्बौैंको घाटा भएको थियो । उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न पाएका थिएनन् । रोजगारी घट्दै गएको थियो । अर्कातिर थप उज्यालोका लागि आयात गरिने वस्तुका कारण आयात बढ्दै गएको थियो । हरेक क्षेत्र बरबाद पार्ने प्राधिकरणका हाकिमहरू घिसिङले हटाएको विद्युत् कटौतीको समय निरन्तर हुनै सक्दैन भनेर कसम खाँदै चुनौती दिइरहेका थिए ।
उनीहरूमाथि दण्ड र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन राज्यपक्षले उचित ध्यान नदिए पनि अब भने नेपालले यस मामिलामा पछि फर्केर हेर्नुपर्ने अवस्था रहनेछैन । आउने वर्षसम्ममा अहिलेको जडित क्षमता बढेर दुई हजार मेगावाट नाघ्नेछ । बिस्तारै हामीले भारतबाट विद्युत् खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहनेछैन । प्राधिकरण आफ्नै सक्रियतामा थपिएको उत्पादन र निजी क्षेत्रको बढ्दो सहभागिताले देशको मागअनुरूपको विद्युत् देशभित्रै उत्पादन हुने सम्भावना बढ्दो छ । अब देशका सबै गाउँसम्म विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने र थप जलाशययुक्त आयोजनाका माध्यमबाट सुक्खायाममा पनि विद्युत् उत्पादन कम हुन नदिने उपायतिर प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयको ध्यान जानु जरुरी छ । यो उज्यालोतिरको यात्राले देशको अनुहार पनि अवश्य उज्यालो बनाउनेछ ।